Mhosva dzekushungurudzwa Hands Off!
20 Chikunguru 2021
Ravenna, akashungurudza mwanasikana wake wekubereka uye mwanasikana wemurume wake ane makore gumi nematatu ekuberekwa: akasungwa
Vaimbove seminarians vari pasi pekuferefetwa nekushungurudzwa pabonde kwemwana mudiki: Ishamwari ye ...
17 Chikunguru 2021
Alto Mantovano, Kushungurudza Makore Gumi Matatu muKarate Gym: Anopomerwa Anobvuma
Oberländer yekushungurudzwa mudare: Kureurura kunenge pasina mazwi
ANOFANIRA KUKUNDA FINN (1) KURUFU.Mumiriri akangoerekana asungwa mudare redzimhosva
Hands off - rega kushungurudzwa kwevana isangano risingabatsiri redzidzo nekudzivirira kushungurudzwa kwevana. Kudzivirirwa kwevana vekireshi uye zera repuraimari, nemitambo yakaita se "Paws away" uye "Muviri wangu ndeangu", ndiko kunetsekana kwedu kukuru.
Aida vapari vemhosva
Goverana na: Akashungurudza mwanasikana wemumwe wake ane makore gumi nematatu okuberekwa kwenguva yakati: Mumwe murume aigara muRavenna akasungwa nekushungurudzwa kwevana. Zvakare achipokana nemwanasikana wake wekubereka, uyo akadaidzwa
20 Chikunguru 2021	No Comments
Vaimbove seminarians vari pasi pekuferefetwa nezvekushungurudzwa pabonde kwemwana mudiki: ishamwari yaDon Tempesta
Goverana na: Pazuva rimwechete apo vamiririri veSquadra Mobile muMilan vakasunga Don Emanuele Tempesta, aimbove seminari kubva kuCuggiono akasungwawo musi
Goverana na: Kunzwa kutsva mukutongwa kwevabereki vaviri vevamwe vasikana vakapinda muzinda. Iye akabatwa, iye zvino ane makore makumi maviri nemana ekuberekwa, angave achibva kumudzidzisi wake wekumabvazuva
17 Chikunguru 2021	No Comments
Goverana na: "Ndine mhosva." Nezwi rakaderera, ane makore makumi maviri-Oberlander akabvuma padare redunhu neChishanu kuti vasikana vatatu vasati vabva zera (mudiki aive gumi chete) akaendeswa
Goverana na: ... kare aive nemakore mashanu akakura muHalle - Axel H. (28) anga akamira pamberi pedare redunhu muHalle kubvira Chitatu. Anofanirwa kune iyo
Milan, mupristi akasungirwa kushungurudzwa kwevana
Goverana na: Mhirizhonga inonzi yakaitika pakati paKukadzi 2020 na Chivabvu 2021. Mumwe mupirisita kubva mudhiocese yeMilan akawanikwa nemapurisa nekuda kwekushungurudzwa kwevana pabonde.
16 Chikunguru 2021	No Comments
Zvinonyadzisira zvevana zvakadyiwa uye zvakagoverwa: Pabonde pabonde vevechidiki kubva kuKoblenz vanoreurura kuzviito
Goverana na: Zvakataurwa nemuchuchisi veruzhinji Hermann-Josef Vierbuchen nemusi weChina mudare redzimhosva makumi mana neshanu kubva pamhosva yemapeji manomwe zvaive zvisinga fungidzirwe zvekuti zvaive zvakaoma kuti vateereri vanzwisise
Uelzen: Kuedzwa kwekushungurudzwa pabonde kwemukomana mudiki (7) kwakatanga
Goverana na: Nemusi weChina kutongwa kwakanangana nemukadzi wemakore makumi mashanu nemanomwe ekuberekwa weUelzen nekuda kwekushungurudzwa pabonde kwemukomana wemakore manomwe kubva kwaari
Kushungurudzwa kunoitwa 'maacolyte' aPope, kunzi kune vanopomerwa makore matanhatu ne6
Goverana na: Nhaurwa dzekutongwa dzakatambirwa neVictoria Judicial Ombudsman panguva yekutongwa kwekushungurudzwa kunofungidzirwa muPreseminar San Pio X yakachengetwa ne
15 Chikunguru 2021	No Comments
"Kushungurudzwa pabonde nemwana wehanzvadzi", mutongo hauna mhosva: maitiro acho anofanirwa kudzokororwa
Goverana na: Muchuchisi anofanira kusarudza zvino kuti achatambudza zvakare here kana kukumbira kusunungurwa kwekupedzisira kweane makore makumi mana akapomerwa Chikamu chechitatu chematsotsi chedare rekukumbira.
Kuongorora zvinonyadzisira zvevana: Mapurisa aifanira kusefa nemamirioni emifananidzo isinganetsi
Goverana na: Basa rinoshungurudza remapurisa mana terabyte yedata akakwenenzverwa nevanoongorora mapurisa eNortheim kuti vaone ane makore makumi mashanu okuberekwa kubva kuSolling yekushungurudzwa pabonde.
Dare redunhu Dachau: murume anoshungurudza hama dzake
Goverana na: Zvinopomerwa zvakakomba, asi mumiriri anozvibvuma zvizere nekusara kumwe chete: Munguva kubva 2013 kusvika 2019, iye zvino ane makore makumi maviri nemana ekuberekwa.
Mamwe makuva zana nemakumi matanhatu akawanikwa paChikoro cheVanhu vekuCanada
Goverana na: Vancouver (dpa) - Kune angangoita zana nemakumi matanhatu panhandare yechimwe chikoro chekare che boarding chevana vemuno pachitsuwa padhuze nekumadokero kweCanada metropolis yeVancouver.
14 Chikunguru 2021	No Comments
Mumiririri kubva kuReklinghausen: Kuvharirwa kwekudzivirira kwakakumbirwa mune mazana emazana ekushungurudzwa
Goverana na: Bochum Nguva pfupi yeKisimusi ya2019 isati yasvika, mukomana asipo anowanikwa mune kabhodhi remurume mukuru muReklinghausen. Mukadzi ane makore makumi mana nemapfumbamwe anofanirwa kunge achihwandisa mwana
Makore matatu anosungwa nekuda kwekushungurudzwa kwevana
Goverana na: Hanzvadzi mbiri dzaive nhamo dzevamwe vavakidzani vane hushamwari. Idzi mhuri mbiri dzave kugara mufurati imwe chete muUnderland kwenguva yakati. Mhuri mbiri idzi dzine
13 Chikunguru 2021	No Comments
Bonn Regional Court.Makore akati kuti mujeri baba vokurera nekuda kwekushungurudzwa pabonde
Goverana na: “Nyaya yemusikana inoshungurudza. Mamiriro avo ezvinhu nhasi ane njodzi, "akadaro Wolfgang Schmitz-Justen, sachigaro wedare repiri rematsotsi rematare edunhu reBonn, neChipiri
Vakomana vakapambwa nekushungurudzwa: Mutongo wakareba mutirongo wevane makore makumi matatu nemanomwe ekuberekwa vane mucherechedzo wechihure
Goverana na: Ndi21.45: 2006 pm neMugovera mune chinyararire chikamu cheUlm panotapwa munhu kwekutanga muna XNUMX: murume
Landsberger anoshungurudza mwanasikana wake wekurera
Goverana na: Kwemakore akati wandei murume anobva kuLandsberg akashungurudza bonde mwanasikana wake wekurera. Zvino, mushure memazuva matatu ekutongwa kwenyaya iyi yemakore makumi manomwe ekuberekwa kuAugsburg Regional Court, Chipiri
Kubiwa nekushungurudzwa kwevakomana vaviri: Makore gumi mutirongo
Goverana na: Mumwe ane makore makumi matatu nematatu akatongerwa makore gumi mutirongo neChipiri kudare redunhu reUlm nekutapa nekushungurudza pabonde kwevakomana vaviri. Dare
Hupenyu hwakazara nekushungurudzwa kweane makore 19 okuberekwa kubva kuIlioupoli: kubva kuna baba kuenda kune mumwe - mupurisa akamutungamira kujeri idzva - VIDEO - FOTO
Goverana na: Nguva dzinotyisa idzo 19-makore ekukura aive nadzo kubva paudiki kudzamara atorwa nekusungwa nemupurisa ane huwori. Kukakavadzana kwezvematongerwo enyika kwakakomberedza chiitiko ichi
12 Chikunguru 2021	No Comments
AITSVAKA VANHU VAKATAURWA PAMUSORO PENYU Mudzidzisi anonzi anoshungurudza vana vakati wandei
Goverana na: Bonn - Pakati pevanhu vese, mudzidzisi anofungidzirwa kuve munyengeri pabonde. Hofisi yemuchuchisi weveruzhinji ine pedagogue yekushungurudzwa kwevana mumatare makumi mana nemana (104)
Kushungurudzwa uye chisimba kuvana vane hutachiona paInternet, Blitz yekurwisa vana zvinonyadzisira.
Goverana na: Mifananidzo nemavhidhiyo ekushungurudzwa kwevana uye mhirizhonga zvakachengetwa panharembozha uye nezvimwe zvishandiso uye zvakatorwa kuburikidza neakakurumbira mameseji app. Iyo Naples State Mapurisa akatora
10 Chikunguru 2021	No Comments
Mudare rekushungurudzwa kwevana pabonde Mupomeri anoramba zvese zvinopomerwa.
Goverana na: Kutongwa kweMagentino ane makore makumi mana nemana ekubatwa nemhosva yekushungurudza mwana mudiki kwakatanga Chipiri mangwanani pamberi pevatongi veChishanu Penal Chikamu che
Kushungurudzwa: Kuvharirwa uye kuchengetedzwa kwekudzivirira kwevaHanoverian
Goverana na: Mitongo yakanangana nevapomeri vakuru yakaitwa mukutongwa kwekushungurudzwa muMünster. Hanoverian anofanira kusungwa kwemakore gumi. Sezvo nevamwe vapomeri, izvo zvakarongeka
Vaimbove vechidiki fire brigade vakapomerwa mhosva yekushungurudza
Goverana na: Cologne / Leverkusen (NW) - Nyaya huru yakamhan'arwa aimbova mutariri wevechidiki weJF Leverkusen yatanga pamberi peCologne Regional Court. Sekutaura kwakasiyana kwemidhiya zvakabatana, zvinokanda
9 Chikunguru 2021	No Comments
Kushungurudzwa pabonde: kusunga gwaro revashandi vekare veKita
Goverana na: Muchuchisi weveruzhinji weKoblenz ari kuferefeta mushandi wekare wepa carecare centre mudunhu reMayen-Koblenz. Anofungidzirwa kuti akashungurudza vana pabonde. Ivo baba
Mwana anoshungurudzwa muimba yepasi: muvakidzani akatongerwa mhosva
Goverana na: Dare rakatemera mutongo wemakore manomwe mutirongo nekuda kwekutsvoda nekubata nhengo dzakavandika dzemwana mudiki Mukomana ane makore matanhatu anoendeswa kuimba yepasi ine rima
8 Chikunguru 2021	No Comments
Saarbrücken wedare redunhu: Pensioner (78) akabatwa nemhosva yekushungurudza pwere kwevechidiki
Goverana na: Kubata chibharo uye vana zvinonyadzisira Dare redunhu muSaarbrücken rakatongera murume ane makore makumi manomwe neshanu kugara mutirongo makore mashanu nekuda kwekushungurudzwa kwevechidiki. Mupomeri
Nehurombo 5000 yakaongororwa
Nhau uye nezvimwe mazuva ese